EXTERNAL HARD DRIVE ကိုနှင့် UTORRENT: အဝန်လျှော့ချရန်အဖြစ် DRIVE ကို 100% ပိသလဲ? - WINDOWS ကိုပိုကောင်းအောင် - 2019
နေ့သည်ကောင်းသော။ ယနေ့ပို့စ်ပြင်ပ HDD Seagate 2.5 1TB USB3.0 HDD ထံအပ်နှံသည်ကို (အရေးအကြီးဆုံးကတော့, မပင်ကိရိယာ၏မော်ဒယ်နှင့်၎င်း၏အမျိုးအစား။ ပို့စ်ပြင်ပ HDD အပေါငျးတို့သပိုင်ရှင်များမှအသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်ဆိုလိုသည်မှာ) ။
အတော်လေးမကြာသေးမီက (လမ်းဖြင့်, ဒီမော်ဒယ်၏စျေးနှုန်း 2700-3200 ပွတ်၏ဒေသတွင်း၌အချို့မြင့်မားတဲ့, ဒါကြောင့်ပူမဟုတ်ပါဘူး။ ) အ hard disk ကို၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ (လမ်းဖြင့်, အခြားရွေးချယ်ထားသည့်မော်ဒယ်များ၌ရှိသကဲ့သို့လုပ်ကွက်လိုအပ်နောက်ထပ်တန်ခိုးမရှိအဘယ်သူမျှမ) စံကို USB cable ကိုမှတဆင့်မှတ်စုစာအုပ်မှ device ကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုပုံခဏအကြာတွင်ကျနော်အဓိကပြဿနာရှာ: Utorrent အစီအစဉ်တွင်ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်သောအခါ - အစီအစဉ်ကို drive ကို 100% အားဖြင့်ပိနေပါသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအကြောင်းအသိပေးချက်0င်ရန်အဒေါင်းလုပ်အမြန်နှုန်းတက်ရဖို့အတွက်! ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်အဖြစ်အားလုံးချော tuning Utorrent ဖြေရှင်း။
HDD နှင့် setting များ၏ရလဒ်များကို၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, ကြည့်ရှုပါ။ ဆောင်းပါး၏အောက်ဆုံး၌။
ပုံမှန်အတိုင်း options များ
ရလဒ်နှင့်ပြင်ပ HDD Seagate 1TB USB3.0 ၏အကျဉ်းပြန်လည်သုံးသပ်
နိယာမမှာတော့စူပါသဘာဝကဘာမျှမ။ ဒါနိုင်ရန်အတွက် ...
တစ်ဦး Utorrent အလုပ်စဉ်အတွင်းပိကြောင်း 1) hard drive ကို။
သူဖြစ်ကောင်းသင်ပြီးသားသင်ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုလျှင်, ရှိသည်။ ဤတွင်မှတ်ချက်မပါဘဲ။
2) BEncode Editor ကိုအစီအစဉ်ကို (က binary file ကိုတည်းဖြတ်များအတွက်အသုံးဝင်သော) - သင်ဒီမှာဥပမာ, ယူနိုင်သည် //sites.google.com/site/ultimasites/bencode-editor ။
3) 10 မိ။ အခမဲ့အချိန်, အဘယ်သူမျှမဆွဲနှင့်အာရုံမရနိုင်အောင်။
အတော်များများကအသုံးပြုသူများကို installation ကို Utorrent စဉ်အတွင်း default အနေဖြင့်ထည့်သွင်းတံ့သော 100% ညှိနှိုင်းမှုများအတွက်စီစဉ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုများသောအားဖြင့် stably နှင့်ချောချောမွေ့မွေ့ပြေး။
သို့သော်ပြင်ပ hard drive ကို၏အမှု၌, သင်ကကြီးမားသောဝန်ပြဿနာကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ဒါဟာမျိုးစုံမိတ္တူဖိုင်များ (ဥပမာ, 10-20 ယူနစ်) ဆိုတဲ့အချက်ကိုကနေပေါ်ပေါက်။ သင်တစ်ဦး torrent download လုပ်နေသည်ကိုပင်လျှင် - အဲဒါကိုတစ်ဒါဇင်ဖိုင်တွေမဖွစျနိုငျကွောငျးမဆိုလိုပါ။
Utorrent နေဆဲ Boot တက်ဟုသတ်မှတ်ခံရနိုင်လျှင်ဖိုင်များကို torrent နှုန်းတဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ရေစီးခြင်းကြောင့်တစ်ဦးအခြို့သောအရေအတွက်ကထက်ပိုပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး - setting ကိုမရရှိနိုင်။ ဒါကကျနော်တို့က fix ရန်ကြိုးစားသောအရာကိုပါပဲ။ အဆိုပါ hard disk ကိုအပေါ်ဝန်ကိုလျှော့ချကိုကူညီနိုငျသောအခြေခံဆက်တင်ပေါ်တွင်ထိတွေ့နှင့်အတူစတင်။
ကျနော်တို့ (သင် Cntrl + P ကိုသော့ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်တတ်နိုင်သမျှ) ကို uTorrent ပရိုဂရမ် settings ကိုသွားပါ။
General 'tab တွင်အမှန်ခြစ်ဖြန့်ဖြူးအချက်များအားလုံးဖိုင်တွေအကြံပြုခဲ့သည်။ ဒီ option ကသင်ချက်ချင်းခြောငျးကို 100% အထိတင်ဆောင်ပါလိမ့်မည်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်မလိုဘဲ, သင့် hard drive ကိုအပေါ်ကိုတက်ကိုအသုံးပြုသည်မည်မျှအာကာသကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
အရေးကြီး parameters တွေကိုက "မြန်နှုန်း" ၌ရှိကြ၏။ ဒီနေရာတွင်အများဆုံးဒေါင်းလုပ်အမြန်နှုန်းနှင့်သက်ရောက်မှုကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။ သင်၏အင်တာနက် link ကိုအနည်းငယ်ကွန်ပျူတာများများအတွက်တိုက်ခန်းများတွင်အသုံးပြုလျှင်ဒီလုပ်ဖို့အကြံပြုသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မြန်နှုန်းမြင့်ကို download / file ကိုပြန်မလိုအပ်သောဘရိတ်တစ်ခုအကြောင်းမရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာအဓိပ္ပါယ်တစ်ခုခုခက်ခဲသည်ဟုပြော - - အလွန်တူညီကိန်းဂဏန်းများအကြောင်းစသည်တို့ကိုသင့်ရဲ့အင်တာနက်အမြန်နှုန်း, ကွန်ပျူတာပါဝါ, ကိုကြည့် ဥပမာအားဖြင့်, ငါ့ Laptop ပေါ်မှာအောက်ပါကိန်းဂဏန်းများ:
က "လာမယ့်" အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောနှစ်ခုအချက်များ settings ကို။ ဒီနေရာတွင်တက်ကြွစွာရေစီးခြင်း၏နံပါတ်နှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရေစီးခြင်းကြောင့်အများဆုံးအရေအတွက်အားရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တက်ကြွရေစီးခြင်းကြောင့်လက်အောက်တွင်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဝန်သိနားလည်ကြ၏။ သင်တစ်ဦးပြင်ပ hard drive ကိုသုံးလျှင်ငါ 3-4 တက်ကြွစွာရေစီးခြင်းနှင့် 2-3 တစ်ပြိုင်နက် downloads, ထက် သာ. ကြီးမြတ်တဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုထားရန်အကြံပြုကြပါဘူး။ ပိ hard drive ကိုဖွင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယူနစ်အချိန်နှုန်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖိုငျမြား၏ကြီးမားသောအရေအတွက်, စတင်သည်။
ထိုအခါနောက်ဆုံးအရေးကြီးသော tab ကို "ယာယီသိမ်းဆည်း" ။ ဒီနေရာတွင်ကဆိုပါတယ် cache ကိုအရွယ်အစားကို အသုံးပြု. ကို item ကို tick နှင့်တန်ဖိုးရိုက်ထည့်, 100-300 mb ကနေဥပမာ။
tick ၏စုံတွဲတစ်တွဲထက်ရုံအနည်းငယ်လျော့နည်း "တိုင်းနှစ်မိနစ်စံချိန်နဂိုအတိုင်းလုပ်ကွက်" ဟုအဆိုပါဖယ်ရှားလိုက်ပါနဲ့ "ချက်ချင်းအပြီးသတ်၏စံချိန်" ။
ဤဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် hard disk ကိုအပေါ်ဝန်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် uTorrent အစီအစဉ်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
torrent နှုန်းကျနော်တို့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု (သို့မဟုတ်ဖိုင်များ) နိုင်အောင်, program ကို uTorrent ဖိုင်များထဲမှတည်းဖြတ်ရန်လိုအပ်သည့်ဆောင်းပါး၏ဤအပိုင်း၌, သူတို့တနည်းအများကြီး, ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့လျှင်။ ဒါက drive ကိုအပေါ်ဝန်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အလုပ်၏အမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်ဒီ setting လုပ်ပါ (file ကိုတည်းဖြတ်မဟုတ်) အခြားအဆိုအရ (ထိုကဲ့သို့သောအရေးပါသော option ကိုမည်သူမဆိုအလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏အစီအစဉ်တွင်ဖြစ်သင့်ကြောင်းယုံကြည်) မရပါဘူး။
လိုအပ် BEncode Editor ကို utility ကိုအလုပ်လုပ်စေရန်။
ထို့နောက်အစီအစဉ်ကို uTorrent (ပွင့်လင်းလျှင်) ပိတ် BEncode Editor ကို run ။ ယခုငါတို့ (ကိုးကားမပါဘဲ) အောက်ပါလမ်းကြောင်းမှာတည်ရှိပါတယ် setting.dat BEncode အယ်ဒီတာအတွက်ဖိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့လိုအပ်:
"ကို C: Documents and Settings လျှောက်လွှာမှာ Data uTorrent setting.dat"
"ကို C: Users အဲလက်စ် AppData Roaming uTorrent setting.dat "ငါ့မှာ Windows 8 ကိုဖိုင်ထဲမှာ (ဒီလမ်းကြောင်းကိုအပေါ်တည်ရှိပါတယ်။ အဲဒီအစား၏"အဲလက်စ်") သင့်အကောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်က hidden folder ကိုမမြင်ရပါဘူးလျှင်, ငါကဒီမှာဒီဆောင်းပါးမှာအကြံပြု:
ဖိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်, သငျသညျ, ကွဲပြားခြားနားသောလိုင်းများတွေအများကြီးတွေ့မြင်ဆန့်ကျင်ဘက်နံပါတ်များဖြစ်သော, ဒါကြောင့်ပေါ်မှာ။ ဤပရိုဂရမ် settings ဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မယ်အဲဒီမှာလည်း uTorrent ကနေမပြောင်းနိုင်ကြောင်းဝှက်ထားလျက်ရှိသည်။
ကျနော်တို့အမြစ် partition ကိုဆက်တင်များ (ROOT) option ကို "bt.sequential_download" type ကို "တစ်ဦး Integer" ကို add နှင့်က "1" ၏တန်ဖိုးသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အခြို့သောမီးခိုးရောင်အချိန်လေးအားရှင်းလင်းထားသည့်အောက်ပါ။ Screenshot ကိုကြည့်ပါ ...
setting.dat ဖိုင်ရှိဆက်တင်အောင်ပြီးနောက်ကယ်နှင့် uTorrent ကို run ။ ဒီအမှားပြီးနောက်, disk ကိုပိနေပါသည်, ကမဖြစ်သင့်!
Utorrent ပရိုဂရမ် settings ပြီးနောက်, disk ကိုတည်ရှိခြင်းမရှိတော့ပိသောမက်ဆေ့ခ်ျကို။ ခြောငျး (ဥပမာ, စီးရီးအနည်းငယ်ဖြစ်စဉ်များ) ဖိုင်တွေ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်တက်ထားလျှင် Plus အား - ခြောငျး (စီးရီး) ၏အစိတ်အပိုင်းများနိုင်ရန်အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နေကြသည်။ ထိုကြောင့်, သင်အဖြစ်မကြာမီပထမဦးဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲမဟုတ်ဘဲကြောင့် (default settings ကိုမှာ) မတိုင်မီဖြစ်သကဲ့သို့တစ်ခုလုံးကို torrent download လုပ်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေထက်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါလိမ့်မည်အဖြစ်အများကြီးအဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောပြပွဲစတင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
HDD က USB 2.0 တစ်ဦး Laptop ကိုချိတ်ဆက်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကိုဖိုင်တွေကူးယူတဲ့အခါမှာမြန်နှုန်း 15-20 MB / s ၏ပျမ်းမျှဖြစ်ပါတယ်။ နှုန်းကိုပေါက် (တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်သမားရိုးကျ hard disk ကို drives တွေကိုအတွက်) - သင်သည်များစွာသောအသေးဖိုင်တွေကော်ပီကူးပါ။
စကားမစပ်, ဆက်သွယ်မှုပြီးနောက်, disk ကိုချက်ချင်းမဆိုယာဉ်မောင်း (အနည်းဆုံးက Windows 7, 8 ရက်နေ့) တွင်မလိုအပ်ပါဘူး install ဆုံးဖြတ်သည်။
သူကတောင်ကွဲပြားခြားနားသောဖိုင်များကိုပေါ်မှာဒေါင်းလုပ်၏နာရီပေါင်းများစွာပြီးနောက်, အပူမပေး, တိတ်တဆိတ်ပြေး။ disc ကို၏စစ်မှန်သောအသံအတိုးအကျယ် 931 GB ကိုဖြစ်ပါတယ်။ တယောက်ကိုတယောက်ကို PC ကနေဖိုင်တွေအများကြီးသည်းခံရ၏ရန်ရှိသည်သူကိုယေဘုယျအားဖြင့်သာမန်ကိရိယာ။
ဗီဒီယို Watch: MKS Gen L - External Driver (နိုဝင်ဘာလ 2019).